लिलामीमा आर.के.स्टुडियो, सुरुवात मूल्य नै २५० करोड « Ramailo छ
लिलामीमा आर.के.स्टुडियो, सुरुवात मूल्य नै २५० करोड
समय : 3:16 pm
राज कपुरले निर्माण गरेका ७० वर्ष पुरानो आर.के. स्टूडियो अहिले लिलामीमा राखिएको छ । घाटामा गएपछि कपूर परिवारले यो स्टुडियो बेच्ने निर्णय गरेका थिए । जब देखि यो स्टुडियो बेच्ने कुरा आयो त्यतिबेला देखिनै रियल इस्टेट मार्केटमा मोल तोल गर्न थालिएको छ ।
मुबईको ठुलो रियल इस्टेट कम्पनीले स्टुडियोको जमिनको मुल्य २५० करोड लगाएको छ । यो स्टुडियो भएको इलाकामा अहिले एक वर्ग मीटर जमिनको मुल्य दुई लाख पचास हजार देखि तीन लाख सम्म रहेको छ । आर.के. स्टुडियो ८००० वर्ग मिटरमा फैलिएको छ । यसै कारणले यसको मुल्य २५० करोड रुपैयाँ लगाईएको हो ।
कपुर परिवारको नजिकको स्रोत अनुसार कपूर परिवार चार सय करोडबाट बोली सुरु गर्नेछन् । यसको इतिहासिक मुल्य मान्यताका साथै एयरपोर्ट नजिकै भएको कारणले मुल्य चार सय करोड लगाउने अनुमान गरिएको छ ।